८० बर्षदेखि निलाहार छन् यी ९० वर्षीय बाबा ! भन्छन्, ‘हजार बर्षसम्म म यसरी नै बाँच्छु’ - Everest Dainik - News from Nepal
८० बर्षदेखि निलाहार छन् यी ९० वर्षीय बाबा ! भन्छन्, ‘हजार बर्षसम्म म यसरी नै बाँच्छु’
एजेन्सीः के कोही मानिस केहि नखाई ज्यूँदो रहन सक्छ ? त्यो पनि केहि दिन, केहि हप्ता, केहि महिना होइन होइन ८० बर्षसम्म । यति मात्र ह्योइन के योगले पाचन प्रक्रियालाई पनि रोक्न सक्छ ? सुन्दा अलि कस्तो कस्तो लग्न सक्छ तर यो साँचो हो ।
गुजरातका प्रल्हाद जानी यस्तै कुराको ठोकुवा गर्छन । ९० बर्षीय प्रल्हादले बिगत ८० वर्षदेखि न त केहि खाएका छन् न त केहि पिएका नै । यहासम्म कि योगको शक्तिले उनि ८० बर्षदेखी ट्वाइलेट सम्म पनि गएका छैनन तथापी उनि अझैसम्मपनि स्वस्थ र जिवितै छन् ।
८० बर्षदेखी न केहि खाएका छन् न केहि पिएका
गुजरातस्थित मेहसाणामा बस्ने प्रल्हाद जानी उर्फ माताजी चुनारीवाले बिज्ञानका लागि चुनौती बनेका छन् । प्रल्हादका अनुसार उनले आध्यात्मिक जीवनका लागि १० बर्षको हुँदादेखि घर छोडेका थिए । एक बर्षसम्म उनि माता अम्बेको चरम भक्तिमा लिप्त भए जसपश्चात उनको भक्ति देखेर माता प्रसन्न भईन र उनलाई माताको असिम कृपा प्राप्त भयो त्यसै बेलादेखि उनलाई न त भोक लागेको छ न त प्यास नै ।
यति मात्र होइन माताको भक्ति गर्न थालेपछि उनि साडी, सिन्दुर, नाकमा नथि र महिलाले खै शृंगार गर्न थाले । जानकारीमा आएअनुसार प्रल्हाद जानी पछिल्लो ५० बर्षदेखि गुजरातको अहमदाबादबाट १८० किलोमिटर दुरीमा रहेको अम्बाजी मन्दिरको गुफामा बसेका छन।
प्रल्हादको कुरालाई मध्यनजर गर्दै डाक्टर र वैज्ञानिकहरुले उनलाई निगरानीमा पनि राखिसकेका छन् । केहि नखाई कोहि कसरि जीवित रहन सक्छ भन्ने पत्त्यर नलागेर उनको हर क्रियाकलापलै अवलोकन गर्न सिसिटिभी समेत जडान गरियो तर सिसिटिभी फुटेजमा पनि एक महिना बर्षदिनसम्म पनि उनले न त केहि खाएको, पिएको न त ट्वाइलेट गएको देखियो । जसलाई देखेर डाक्टरदेखि बैज्ञानिकसम्म पनि अचम्ममा परेका छन् ।
प्रल्हाद जानीले दावी गरेका छन् कि उनि यसै गरि हजार वर्षसम्म पनि जिवितै रहन सक्नेछन । यसका साथै उनि एड्स, मधुमेहजस्ता गम्भीर रोगको उपचार गर्न सक्छु पनि भनिरहेका छन् । यति मात्र होइन उनि निसंतान्लाई एक फल खान दिएर उनीहरुको उपचार समेत गर्छन। उनले यसअघि पनि हजारौं मानिसको उपचार गराईसकेको उनका भक्तहरु बताउछन् ।
ट्याग्स: प्रल्हाद जानी